Manchester United oo xaqiijisay mudada ay garoomada ka maqnaan doonaan Anthony Martial iyo Jesse Lingard – Gool FM
(Manchester) 15 Feb 2019. Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyey in Anthony Martial iyo Jesse Lingard ay ka maqnaan doonaan Manchester United kulamada ku soo aaddan ee ay la leeyihiin Chelsea iyo Liverpool.
Lingard oo dhaawac muruqa ah uu soo gaaray iyo Martial oo gumaarka ka xanuunsanayey ayaa laga saaray garoonka qeybtii hore kulankii lugta hore ee wareegga 16-ka Koobka Horyaalladda Yurub ee Champions League oo ay guuldarrada kala kulmeen Paris Saint-Germain Arbacadii.
Waxa uu macallin Ole maanta oo Jimce ah Saxaafadda u xaqiijiyey in labadan ciyaaryahan ay seegi doonaan kulanka wareegga 5-aad ee FA Cup-ka oo ay Man Utd Isniinta la leedahay Chelsea iyo sidoo kale kulanka ay Axadda soo aaddan soo dhoweynayaan Liverpool ee horyaalka Premier League.
Labadaan ciyaaryahan ee Martial iyo Lingard ayaa sidoo kale seegi kara kulanka lugta labaad ee wareegga 16-ka Koobka Horyaalladda Yurub oo ay booqanayaan kooxda PSG.
Tababare Solskjaer ayaa shaaca ka qaaday in Weeraryahanka 17-sano jirka ah ee Mason Greenwood kaasoo dhaliyey 26-gool 24-kulan oo uu u ciyaaray kooxda Man Utd ee yar yar xilli ciyaareedkan uusan safan karin kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda waa weyn ee Man United ciyaarta ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge, maadaama uu isna dhaawacan yahay.
“Waxaan filayaa inay maqnaan doonaan labo illaa saddex todobaad.” ayuu yiri Solskjaer isagoo ka hadlayey xaaladda Lingard iyo Martial.
“Intaa kaddib waa inaan eegnaa ciyaartoyda da’da yar, Mason Greenwood waa waqtigiisa uu tallaabo qaadi lahaa, laakiin nasiib-darro isagu waa dhaawac, waxaana sidoo kale uu maqnaan doonaa dhowr todobaad oo kale.”
“Mararka qaar taasi waa sida uu nasiibku u socdo, laakiin Mason waa uu heli doonaa fursaddiisa.” ayuu macallin Ole ku daray hadalkiisa.
Kulamada laga yaabo inay seegaan Anthony Martial iyo Jesse Lingard:-
Waa shanta kulan oo ay Man United la ciyaari doonto Chelsea, Liverpool, Crystal Palace, Southampton iyo PSG.